Amaphutha aphezulu ayi-10 amabhizinisi Insangu ne-CBD enza ngokusetshenziswa kwenjini yokusesha
Amaphutha ayi-10 aphezulu wokuzitika ngensangu abasebenza ngewebhusayithi yabo.
Top 10 amaphutha insangu zokungcebeleka…
Ukungaqiniseki ukuthi isayithi liyasebenziseka kalula
Cishe amaphesenti angama-75 abo bonke abasesha i-inthanethi benziwa ngamaselula. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kumabhizinisi anekheli lendawo ngoba isikhathi esiningi lawa maklayenti angaba khona ahamba. I-Google iqale lolu shintsho ngo-2014 lapho ibona ukuthi usesho lweselula luqede usesho lwedeskithophu okokuqala. IGoogle izokwenza njalo PENALIZE isiza sakho uma kungenaselula. Ungahlola iwebhusayithi yakho njengamanje ngesixhumanisi esinobungane se-Google lapha: https://search.google.com/test/mobile-friendly
Ukungabi nemenyu yokusingathwa kwemikhiqizo kuwebhusayithi yabo.
Iningi lezindawo zokuzilibazisa ngensangu zinamamenyu wazo abanjwe kumasayithi wesithathu afana neLeafly noma i-Weed-Maps. Leli iphutha elikhulu ngenxa yalezi zizathu ezilandelayo:
Izinjini zokusesha zeGoogle zikhetha amawebhusayithi abuyekeza okuqukethwe kwawo kaningi. Lapho isayithi livuselelwa kaningi kulapho isayithi lizokhonjwa kakhulu ngabakhasi be-Google.
B.Okuqukethwe yiNkosi, iwebhusayithi enokuqukethwe okuningi izolokhu ibalwa ngaphezulu kunaleyo enokuncane.
C. Okwakho izinga lokunciphisa intando ephakeme kakhulu. Izinga lokuncipha yigama le-SEO elikala ukuthi abasebenzisi bahlala isikhathi esingakanani kuwebhusayithi yakho. Uma uyi-Google insangu futhi ikulethela iwebhusayithi ethengisa izingxenye zemoto ucindezela ngokushesha uqhubeke nokusesha kwakho. I-Google ibheka le metric njengophawu lokuthi iwebhusayithi yakho iyi-spammy noma ikhwalithi ephansi. Abantu abathola imininingwane abayifunayo bahlala kusayithi isikhathi eside futhi bafunde imininingwane.
D.Uma imenyu yakho ingekho kumakhasimende wesayithi lakho afuna imikhiqizo ethile azoya kwabancintisana nabo esikhundleni salokho. Nasi isibonelo,
Abacwaningi Abasebenzisi be- I-Blue Dream eTacoma nayi imiphumela.
Amabhizinisi ensangu angenayo imenyu yawo kuwebhusayithi yawo azokwenza njalo UNGALOKOTHI vela kulaba baseshi bendawo.
Ungenzi ucwaningo lwegama elingukhiye ngaphambi kokwakha isiza.
Uma ungenzi ucwaningo lwegama elingukhiye okuyinqubo yokusebenzisa amathuluzi athile ukuthola ukuthi yimaphi amagama asemqoka abantu abawadingayo kakhulu uzothola ithrafikhi encane nokuthengisa kunabancintisana nabo. Indlela elula yokwenza ucwaningo lwamagama asemqoka okuyisisekelo ukuthayipha igama lakho eliqondiwe ku-Google. I- kuqedile ngokuzenzakalela iziphakamiso ziyinkomba enhle kuhlobo lwamagama abathengi abawasebenzisayo ukuthola umkhiqizo noma izinsizakalo zakho. Uma iwebhusayithi yakho ingenawo la magama asemqoka kusihloko, izincazelo zeMeta nomzimba wekhasi lakho lewebhu ulahlekelwa amakhasimende amaningi.
Ibhulogi yakho isebenza ngezinhloso ezilandelayo:
A. Ingeza okuqukethwe kuwebhusayithi yakho. Ungangeza ukubuyekezwa komkhiqizo, izindaba, imicimbi nokuningi.
B. Igcina iwebhusayithi yakho ivuselelwe ngokuqukethwe okusha okuzokunikeza amazinga aphezulu.
C. Uzobamba amagama angukhiye amade angamaphesenti angama-75 alo lonke usesho. Igama elingukhiye elifushane lomsila kungaba into efana nokuthi "ama-dispensaries eduze kwami" igama elingukhiye elide lomsila kungaba ukuthi "Iyiphi indawo yokudlalela insangu engcono kunazo zonke eSeattle". Futhi khumbula ukuthi ukusesha okungamaphesenti angama-25 ngosuku yilokho i-Google engakaze ikubone ngaphambili. Ngokufaka ibhulogi futhi uyigcine ivuselelwa ngokuqukethwe okuhle uzobamba amanye ala makhasimende.
Ikhamera ye-Vital X Dispensary Indoor / Outdoor WIFI
199.99 kuyathengiswa For 119.00
Ukungasebenzisi uhlu lwakho lwebhizinisi le-Google nekhasi le-Google-Plus.
I-Google izama ukuncintisana namanye amasayithi omphakathi nawokubuyekeza afana neFace book neYelp. Ngokuqedela ukufakwa kuhlu kwebhizinisi lakho le-Google nokungeza izithombe ezifanele i-Google izokwazi ukuthatha ibhizinisi lakho ngokungathi sína futhi ilibeke ohlwini oluphakeme. Futhi ngokubuyekeza amakhasi wakho we-Google kanye nokukhuthaza amakhasimende akho ukuthi alandele ikhasi lakho. Okuthunyelwe kwakho kuzovela kumiphumela yabo yosesho cishe ngaso leso sikhathi.
Hhayi ukumaketha ngo-You-tube
I-Google iyinjini yokusesha enkulu kunazo zonke emhlabeni, okungaziwa ngabantu abaningi ukuthi i-You-Tube iyinjini yokusesha yesibili ngobukhulu emhlabeni. Futhi uqagele ini? I-Google ingumnikazi we-You-Tube. I-Google iyakuthanda amavidiyo we-You-Tube ngoba angathengisa ukukhangisa noma nini lapho abasebenzisi bewabuka. Ngakho-ke kungaba nengqondo ukuthi ube nesiteshi se-You-tube sebhizinisi lakho nokuthumela njalo amavidiyo wamagama asemqoka ahlobene nebhizinisi lakho.
Hhayi ukuqoqa ama-imeyili wamakhasimende
Iwebhusayithi yakho kusukela osukwini lokuqala kufanele ibe nesigaba lapho amakhasimende angashiya khona igama nekheli le-imeyili ukuze ajoyine uhlu lwakho lokuposa. Ngemuva kwalokho ungasebenzisa lolu hlu lwamakheli ukumemezela imicimbi, izaphulelo kanye nomncintiswano wamasenti edola.
Akudingi abathengisi ukuthi baxhume kusayithi lakho.
Enye yezindlela ezibaluleke kakhulu iGoogle enquma ngayo amandla wewebhusayithi ukuthi mangaki amanye amawebhusayithi akhomba izixhumanisi emuva kuwe. Lokhu kubalwa njenge- ivoti le-inthanethi ukuthi iwebhusayithi yakho ibhizinisi langempela futhi inokuqukethwe okuhle. Kodwa-ke zonke izixhumanisi azilingani; ufuna izixhumanisi ezivela kumawebhusayithi asenkambeni efanayo yebhizinisi okuyo. Bangaki abathengisi bakho abanamawebhusayithi? Benze bonke bakhombe isixhumanisi sakho esivela lapho. Lokhu kuzosiza KOKUBILI amabhizinisi abeka ukuthengisa okukhuphuka ngokwenyuka nobabili.
Ukungabi nabasebenzi abazibandakanya nokuqukethwe nokwabelana komphakathi.
Bangaki abasebenzi bakho abane-Face-book, twitter noma i-akhawunti yakwaGoogle? Ingabe bathumela futhi babelana ngokuthunyelwe kwakho kwebhulogi? Ngabe bashiya imibono kuwebhusayithi yakho? Ngabe bakha okuqukethwe ngokwezifiso nemibhalo mayelana nebhizinisi lakho? Uma bengekho kufanele babe njalo. Lapho amasheya wezenhlalo eqhubeka ngokwengeziwe lapho ibhizinisi lakho lizophakama khona. Impumelelo yabo incike empumelelweni yakho.
Funda umhlahlandlela wethu Izindlela eziyi-8 abasebenzi abangasiza ukuthuthukisa ukusebenza kwenjini yakho yokusesha.
Ayiphenduli kuzibuyekezo zakho ze-Google.
Ngokuya ngocwaningo olwenziwe ngu I-Brightlocal Ama-88% wamakhasimende athemba ukubuyekezwa okuku-inthanethi njengokunconywayo komuntu siqu — okuyinto emangalisayo uma ubheka iqiniso lokuthi izibuyekezo zithunyelwa ngabantu abangabazi. Ucwaningo olufanayo olwenziwe yiBrightlocal; inqume ukuthi yi-12% kuphela yabantu engafundi njalo ukubuyekezwa kwezinsizakalo zebhizinisi noma imikhiqizo. Iningi labaninimabhizinisi abazi nokuthi bangaphendula kuzibuyekezo zabo futhi lokho kuyinzuzo yakho uma ulisebenzisa kahle. IGoogle ikhuthaza abanikazi bamabhizinisi ukuthi baphendule kuzibuyekezo ezinhle futhi nokubi kakhulu okubaluleke kakhulu. Lokhu kukhombisa iGoogle neKhasimende ukuthi unendaba nedumela lakho eliku-inthanethi. IGoogle ibheka lokhu njengophawu lokuthi ibhizinisi lakho lisemthethweni futhi lizokukhuphula phezulu.
Iya lapha ukuze ufunde ukuthi ungaphendula kanjani kuzibuyekezo zakho ze-Google. https://support.google.com/business/answer/3474050?hl=en
Isibonelo Sokuphendula Ekubuyekezweni Kwamakhasimende
Ukwenza kahle kwe-Dispensary Search Engine kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ongazenza ukuletha amakhasimende amaningi. Uma ibhizinisi lakho lingekho ekhasini lokuqala le-Google lawo makhasimende aya kwabancintisana nabo.
Isenselogic.com iphethwe nguDavid Meshach owayengunjiniyela we-database kaMicrosoft futhi engumnikazi wezokwelapha insangu yezokwelapha. Siyazi ukuthi kunzima kanjani ukuncintisana emakethe yensangu yokuzilibazisa neyokwelapha. Ngokuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho ayinaziphambeko futhi yenziwe kahle kahle uzothola ukugxuma emncintiswaneni wakho.
Xhumana nathi namuhla ukuthola a UKUHLOLWA KWAMAHHALA kwe-SEO kuwebhusayithi yakho yamanje noma ukuphendula noma yimiphi imibuzo ongaba nayo mayelana newebhusayithi yakho.
Chofoza lapha ukugcwalisa ifomu lethu lokuxhumana
Isigaba: BlogBy esiya July 3, 2017 3 Amazwana
Tags: Ukusetshenziswa Kwezinjini Zokusesha ZasemakhayaInsangu SEO
About the Author: esiya
PreviousPost Previous:Ngabe iLeafly & Weedmaps ikhokhisa malini ukukhangisa ku-2019?OlandelayoPost Next:Izindlela eziyi-8 abasebenzi bakho abangasiza ngazo ibhizinisi lakho ukuthi lithole imali ethe xaxa nge-SEO
lokho thintana uthi:
Julayi 1, 2020 ku-9: 06 pm
Ngikujabulele lokhu okuthunyelwe kubhulogi! Ngibukeza indawo yakho yebhulogi ngokufanele
ngokujwayelekile futhi uhlala ukhipha izinto ezimbi.
Ngabelane ngalokhu kuFacebook wami wezindawo zokuzithokozisa zensangu futhi nabalandeli bami bakuthandile
it! Gcina umsebenzi omuhle 🙂
Julayi 2, 2020 ku-2: 26 pm
Indlela yokuthola imali ngokusebenzisa imishanguzo yokujabulisa insangu usebenzisa i-search engine optimization
Ngemuva kwezinsuku ezingama-30 kuphela, kusamele ngizinciphise ukuze ngiqiniseke ukuthi angiphuphi.
Ngathola amashumi ezinkulungwane zamadola njalo ngenyanga ngezindonga zami ezine ezithokomele.
Inzuzo ikhula futhi ikhule futhi ikhule!
Ngokuchofoza okumbalwa nje, ungakhiqiza ama- $ 15,000 nsuku zonke impilo yakho yonke
Induduzo Yasemhlabeni I-CBD uthi:
Agasti 8, 2020 ku-12: 11 am
Idizayini enkulu ye-dispensary website design ne-SEO.
Igama * Email * Iwebhusayithi
ifomu elicacileThumela amazwana